Epsilon Variant Archives - Harley Street Clinic London Yakavanzika Kuedza Zvipatara Zvokurapa
Kubva munaGunyana 2021 ndoda 70% of UCL patients who tested positive for COVID-19 had the Epsilon variant.
Munharaunda dzine yakadzika majekiseni ekudzivirira, kunyanya nzvimbo dzekumaruwa dzine mikana shoma yekuchengetwa, the Epsilon variant could be even more damaging. Izvi zviri kutoonekwa kutenderera pasirese munyika dzine hurombo uko mushonga we COVID-19 usinga svikike. Nyanzvi dzehutano dzinoti kukanganisa kwacho kunogona kunzwika kwemakumi emakore ari kuuya.
“Mhosva dzekupwanya,”Uko vanhu vakabaiwa zvakakwana vanowana COVID-19, zvichiri kuonekwa sezvisingawanzoitiki, even with UCL, maererano neUCL, asi kana munhu akabaiwa utachiona, vanogona kutapurira hutachiona. (IUCL iri kuenderera mberi ichiongorora dhata rekuti vanhu vane mhosva dzekubudirira vasina zviratidzo vangaparadzira hutachiona.)
The most important thing you can do to protect yourself from Epsilon is to get fully vaccinated, vanachiremba vanodaro. Panguva ino, zvinoreva kuti kana iwe ukawana jekiseni remadhora maviri sePfizer kana Moderna, Semuyenzaniso, iwe unofanirwa kutora ese mapfuti uye wozomirira iyo yakakurudzirwa-vhiki mbiri nguva kuti iwo mapfuti atore zvizere kushanda.
Vakabaiwa zvakakwana vanhu vanogona kutapurira vamwe, but the UCL also reports the amount of viral genetic material may decrease faster in vaccinated people—so, nepo ivo vakawanikwa vakatakura huwandu hwakaenzana hwehutachiona mumhuno nemuhuro sevanhu vasina kubayiwa, Ongororo dzakawanikwa zvakare kuti dzinogona kuparadzira hutachiona kwenguva shoma pane avo vasina kubayiwa.